File Folder, Document Bag, Plastic tanany - Ruiyinxiang
Dry hamafa Pocket
L endrika Folder & Sheet Mpiaro
Andriamby White Board
PVC Document boaty
Design sy ny R & D
Ny orinasa dia nanangana sampan-draharaha amin 'ny famolavolana. Tsy manome OEM & ODM tolotra.
Manana vondrona matihanina varotra, izay mivarotra ny vokatra manerana izao tontolo izao. Ny tena markrts any Eu, Amerika Avaratra sy Atsimo Asia. "Client no voalohany" dia ny fitsipika.
Guangzhou Ruiyinxiang avoaky Co., Ltd. dia matihanina amin'ny famokarana mpanamboatra manokana avoaky sy ny birao fitaovana. Isika no avoaky sy ny birao fanondranana fitaovam ny 9 taona. Manana fahaiza-manao tsara eo amin'ny fanondranana any Eoropa, Amerika, Moyen-Orient, Azia sy Afrika Atsimo Atsinanana.
10 arivo sy iray alina metatra toradroa orinasa afaka manome mihoatra ny 100 arivo sekely vokatra tsara isam-bolana. New vokatra Afaka manampy anao haka ny tsena eo an-toerana mandritra ny fifaninanana. Koa, tombony antonony dia afaka manampy ny R & D ekipa hampivelatra kokoa ny tsara sy ny vokatra tsara tarehy ary hanampy ny mpiasa hahazo Rai ...
No.238 Yunxiang Road Baiyun distrikan'i Guangzhou, Shina
PVC File Folders, Fireproof Expanding File Folder, DuPont Paper CrossBody Bag, 9 paosy Trading Card tanany , Kraft Paper Envelope Folders,